Dinik’asa tao Toamasina niarahan’ny Antenimierandoholona sy ny Fondation Friedrich-Ebert Stiftung – Sénat de Madagascar
Dinik’asa tao Toamasina niarahan’ny Antenimierandoholona sy ny Fondation Friedrich-Ebert Stiftung
Notontosaina tao amin’ny renivohitra ara-toe-karenan’i Madagasikara, Toamasina, ny dinik’asa nokarakarain’ny Antenimierandoholona niaraka tamin’ny Fondation Friedrich-Ebert Stiftung ny 29 sy 30 aogositra 2018. Izany dia tafiditra ao amin’ny Fandaharam-piaraha-miasan’ny FES amin’ny Andrimpanjakana. Nifantoka tamin’ny lafiny ara-tsosialy sy toe-karena ny dinik’asa. Ary « Ny fiatraikan’ny fanitarana ny seranan-tsambon’ny Toamasina eo amin’ny sehatra ara-tsosialy sy toe-karena » no lohahevitra.
Nizara telo lehibe ny fandaharam-potoana :
– Ny 29 aogositra 2018 maraina tao amin’ny Sharon Hôtel no notanterahana ny dinik’asa ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Fifanakalozan-kevitra mikasika ny fiatraikan’ny fanitarana ny seranan-tsambon’ny Toamasina eo amin’ny lafiny ara-toe-karena.
Nandray anjara mavitrika tamin’izany ny eo anivon’ny Fiarahamonimpirenena ao an-toerana sy ny Loholon’i Madagasikara.
– Ny 29 aogositra tamin’ny 3 ora tolak’andro tao amin’ny Lapan’ ny Tanana ny fihaonana tamin’ny vahoaka. Fotoana nampahafatarana sy niresahana ny fisian’ny lalàna momban’ny fanatsarana ny tontolo an-drenivohitra sy ny trano fonenana ary ny fiantraikan’ny fampiharana io lalàna io eo amin’ny tananan’ny Toamasina.
Fanontaniana nipetraka:”Fomba ahoana no ialana amin’ny tsy fitoviana eo amin’ny samy tanan-dehibe?. Ny fihainoana sy fifanakalozan-kevitra no fomba mahomby hitondrana fanatsarana amin’io lalàna io.
– Ny alakamisy 30 aogositra tamin’ny 8ora sy sasany tao amin’ny Sharon hôtel no fotoana nihaonan’ny Loholona tamin’ireo solotenan’ny vondrombahoaka voafidy sy ONG ary ireo mpiara-miombon’antoka ao an-toerana. Nitondra ny olana sy ny hetahetany avy ireto farany.
Tsara marihina fa ny hetsika dia tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny FES sy ny Antenimierandoholon’i Madagasikara.
Araka ny andininy faha 83 ao amin’ny Lalàm-panorenana dia mpanolontsaina ara-toe-karena, sosialy, kolotoraly ary mpiahy ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona.
Ny hetsika rehetra voarakitra ao amin’ny Fandaharam-piaraha-miasan’ny FES amin’ny Andrimpanjakana dia mitodika indrindra amin’ny fanamafisana ny Parlemanta amin’ny maha Andrimpanjakana demokratika azy. Eo koa ny fanenana ny elanelana misy eo amin’ny vahoaka, ny mpitondra, ny mpiara-miombon’atoka sosialy, ary ny Fiarahamonimpirenena.
Fanamafisana ny « parlementarisme » eto Madagasikara sy hisian’ny firesahana mivantana eo amin’ny olom-boafidy sy ny mpifidy no tanjon’ny tetik’asa ary hiamafy arak’izany ny fifamatorana eo amin’ny roa tonta.